वफादारी पुरस्कार | Martech Zone
मंगलवार, नोभेम्बर 13, 2012 शनिबार, नोभेम्बर ०,, २०२० Douglas Karr
जब म अखबारमा काम गर्थें, मलाई सधैं लाग्छ कि हामीले पछिल्तिर कामहरू गरेका थियौं। हामीले कुनै पनि नयाँ ग्राहकलाई अखबारको केही निःशुल्क हप्ताहरू प्रस्ताव गर्‍यौं। हामीसँग ग्राहकहरू छन् जसले बीस प्लस वर्षको लागि पूरा मूल्य तिर्ने गरेका थिए र कहिल्यै छुट वा एक धन्यवाद-सन्देश पनि प्राप्त गरेनन ... तर हामी कसैलाई हाम्रो ब्रान्डमा अविलम्ब विश्वास दिलाउन तत्काल पुरस्कार दिन्छौं। यो कुनै मतलब छैन।
यसका ग्राहकहरूको वफादारीको लागि प्रेरणा पाउँदा के फाइदाहरू हुन्छन्? र यो बफादारीलाई प्रेरणा लिन के लिन्छ? पुरस्कार निश्चित रूपमा मद्दत गर्दछ, तर यो अझ महत्त्वपूर्ण हो कि उत्कृष्ट उत्पादन वा सेवा प्रदान गर्ने कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्नु, र शीर्ष-निशान ग्राहक सेवाको लागि परिचित हुनु। Zendesk पछिल्लो इन्फोग्राफिक, वफादार इनामहरू, ग्राहक वफादारी धेरै महत्त्वपूर्ण छ देखाउँदछ। Loyal 78% वफादार ग्राहकहरूले तपाइँको ब्रान्डको बारेमा शब्द फैलाउन मद्दत गर्छन्, र% 54% ले एक प्रतियोगीमा स्विच गर्न पनि विचार गर्दैन।
टैग: ग्राहक वफादारीग्राहक पुरस्कारवफादारीवफादारी कार्यक्रमपुरस्कार कार्यक्रमपुरस्कार
प्रस्तुतीकरण: तपाइँको घटना कसरी सुपरचार्ज गर्ने